Entana: Manova mpivarotra mailaka nefa tsy manova ny UI-nao! | Martech Zone
Fony aho niasa tamina mpanome tolotra mailaka ho mpitantana ny vokatra dia nahita drafitra iray izay nahatonga ahy hanana endrika hafahafa vitsivitsy aho. Tamin'ny fotoana nanananay mpamorona vitsivitsy niasa tamin'ny anay API isan'andro ary manana am-polony maro izahay izay niasa tamin'ny interface ny mpampiasa. Ny interface user dia tsipika kaody an-tapitrisany ary mitazona ny latabatra fanohananay sy ny fitantanana kaonty ho be tontolo andro. Mifanohitra amin'izany, ny API dia nandefa mailaka bebe kokoa ary, rehefa nitsangana ny mpanjifa, dia tsy nahare firy tamin'izy ireo intsony izahay.
Ny hevitro? Amboary ny interface user hampiasa ny API ary omeo ny interface interface. Marina izany… sokafy fotsiny ilay loharano ary apetraho eny an-tsena. Avelao ny orinasa hampiasa izay sakamalao tadiaviny ary esory ny ambiny. Nampihoron-koditra ny orinasa fa hanana drafitra tahaka izany aho. Mampalahelo fa tsy fantatr'izy ireo mihitsy fa ny sanda nentin'izy ireo dia ny fandefasana ny hafatra fa tsy ny fananganana azy. Entana dia eo anoloana izay mifandray amin'ireo mpamatsy serivisy mailaka iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny sehatra OngageConnect.
OngageConnect ™ no sehatra marketing amin'ny mailaka voalohany eran'izao tontolo izao izay mifandray amin'ny mpanome tolotra mailaka marobe (ESP). Io dia ahafahan'ny fikambanana mivezivezy amin'ny laoniny ny mailak'izy ireo amin'ny alàlan'ny mpivarotra marobe avy eo anoloana. Izy io koa dia mailaka eo aloha amin'ny serivisy ho an'ny serivisy relay cloud SMTP. Io tombony io dia ahafahan'ny fikambanana manana ny fahaizana mampiasa ny tanjaky ny fampitana maro an'ny ESP sy ny SMTP, mba hanatsarana ny fahafahan'ny mailaka hampitombo ny fampisehoana mailaka sy ROI.
Miankina amin'ny fangatahanao dia azonao atao ny mandefa mailaka amin'ny alàlan'ny Amazon SES, serivisy SMTP miorina amin'ny rahona, na mpamatsy tolotra mailaka maromaro. Ny vidiny dia ampahany amin'ny vidiny an'ny mpamatsy hafa - tena mila mijery azy ireo ianao!
Tags: mailaka betsakamailaka famolavolanamailaka Marketingmailaka mailakasehatra mailakatatitra momba ny mailakamailaka mpampiasa interface tsaraengage
LocalVox: Marketing eo an-toerana sy any amin'ny orinasa kely